सत्ता गठबन्धनभित्र नेकपा (एस)ले महत्वपूर्ण स्थानमा दाबी गरेपछि सिट बाँडफाँटमा समस्या ! « News24 : Premium News Channel
सत्ता गठबन्धनभित्र नेकपा (एस)ले महत्वपूर्ण स्थानमा दाबी गरेपछि सिट बाँडफाँटमा समस्या !
काठमाडौं । सत्ता गठबन्धनभित्र स्थानीय तहको निर्वाचनमा सिट बाँडफाँटमा समस्या देखिएको छ । आइतबार बालुवाटारमा बसेको गठबन्धनको स्थानीय तह निर्वाचन तयारी, परिचालन तथा अनुगमन समितिको बैठकमा चुनावी तालमेलका लागि सिट बाँडफाँटका बिषयमा सहमति हुन नसकेको हो ।
बैठकपछि सञ्चारमन्त्री एवं कांग्रेस नेता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सिट बाँडफाँटको छलफल लम्बिएको जानकारी दिए । यसबिषयमा सोमबार पुन छलफल हुने उनले बताए । बैठकमा कुन–कुन स्थानीय तहमा कसरी उमेदवार खडा गर्ने भन्ने छलफल भएको उनले जानकारी दिए ।
बालुवाटार स्रोतका अनुसार नेकपा एकीकृत समाजवादीले महत्वपूर्ण स्थानमा दाबी गरेपछि समस्या उत्पन्न भएको हो । सत्ता गठबन्धनमा रहेका कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले चुनावी तालमेल गर्ने समझदारी गरिसकेका छन् ।
तर कुन तहमा कसलाई उठाउने भन्ने निष्कर्षमा पुग्न सकेका छैन ।